Thursday June 14, 2018 - 12:19:05 in Wararka by Super Admin
Digniintaan oo kasoo baxday wasaarada arrimaha dibadda dowladda Ingiriiska ayaa lagu sheegay in ay jirto halis xooggan oo dhanka ammaanka ah soona wajahday muwaadiniinta wadankeeda ee ku sugan guud ahaan dalka Soomaaliya.
Warka kasoo baxay Dowlada Ingiriiska ayaa lagu sheegay in muwaadiniintooda ay halis ugu jiraan in ladilo ama la afduubto, halistaas oo ay ku sheegeen inay la wadaagaan muwaadiniinta kale ee reer galbeedka ah.
" Dhamaan muwaadiniinta Ingiriiska ah ee doonaya inay u safraan Soomaaliya waxaan u sheegeynaa in ay ka joogsadaan, kuwa hadda ku suganna waxaan ku amraynaa in ay kasoo baxaan" ayaa lagu yiri warka qoraalka ah ee kasoo baxay Dowlada Ingiriiska.
Dowlada Ingiriiska ayaa sheegtay in aysan awoodin in ay caawiso muwaadiniinta wadankeeda ee ku sugan Soomaaliya haddii ay halis la kulmaan.
" Safaarada Ingiriiska ee ku taalla Muqdisho ma awooddo in ay wax gargaar ah idiin fidiso, haddii aad joogto meel walba oo kamid ah Soomaaliya, aadna u baahato in lagu caawiyo, lasoo xiriir safaarafa Ingiriiska ee ku taalla caasimada Kenya ee Nairobi" ayaa lagu yiri warka qoraalka ah.
Dowladda ingiriiska ayaa safaarad- magac uyeel ah ku leh Magaalada Muqdisho, taas oo ku dhex taalla Xerada ciidamada AMISOM ee Xalane, waana dhisme aanan lahayn wax muuqaal safaaradeed ah, balse kakooban qolal yar yar oo ay ku hareereysanyihiin jawaanno aad u waaweeyn oo ay carro ka buuxdo kuwaas oo loogu tala galay in ay gabbaad uga noqdaan madaafiicda iyo weerarada kale ee inta badan lala beegsado Xerada Xalane.
Weerarada ay ka casbi qabto dowlada Ingiriiska ayay ku sheegtay in muwaadiniinteeda lagula beegsan karo Xafiiskayada Dowladda Federaalka ah iyo goobaha ay iskugu yimaadaan dadka ajaanibta ah iyo kuwo ay ku sheegeen in ay muhiim yihiin.
Boqolaal ka tirsan ciidamada Ingiriiska ayaa ku sugan gudaha Soomaaliya, kuwaas oo taageero dhanka milatari siiya ciidamada Midowga Afrika iyo maleeshiyaatka Dowladda,Lamna oga in digniinta kasoo baxday Wasaarada arimaha dibada ee dowladaas ay saamaynayso ciidamadaas qaybta ka ah duullaanka Saliibiga ah.
Dawlada Maraykanka ayaa iyadu horey usoo saartay digniin noocaan oo kale ah, iyadoo muwaadiniinteeda uga digtay inay soo aadaan ama kusii sugnaadaan Wadanka Soomaaliya sababo la xiriira ammaankooda daraadeed.
Dowladaha Reer galbeedka oo ay ugu horeeyaan Ingiriiska, Maraykanka iyo kuwa ku jira Midowga Yurub ayaa boqolaal muwaadiniintooda ah waxay ku suganyihiin gudaha Soomaaliya. Marka laga soo tago muwaadiniinta asal ahaan wadamadaas u dhashay ee ku sugan gudaha wadanka ayaa sidoo kale waxaa jira in inta ugu badan masuuliyiinta iyo horjoogayaasha Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ay haystaan dhalashooyinka wadamadaas ayna u xibaabanyihiin inay muwaadiniin reer galbeed ah yihiin.
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya, Maxamad Cabdullaahi Farmaajo ayaa kamid ah Muwaadiniinta Maraykanka ah ee ku sugan Soomaaliya, Ra'iisul wasaaraha kooxdaas ninka lagu magacaabo Xassan Cali Khayre ayaa isaguna haysta dhalashada Wadanka Norway, halka inta badan wasiirada iyo xildhibaanada kooxdaas ay sidoo kale haystaan dhalashooyin reer galbeed ah.